यौनमा पुरुषको होइन महिलाको अधिकार हुनुपर्छ -स्मिता थापा
- नेपाली सन्देश बिहिबार, बैशाख ६, २०७५ , 6.2K जनाले हेर्नुभयो
मलाई लोग्ने होइन, लोग्नेमानिस चाहिन्छ’ यसो भन्ने ‘उनी’ हुन मोडेल स्मिता थापा । मोडेल थापा यौनमा पुरुषको होइन महिलाको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् ।
नेपाली समाजमा पुरुषहरु महिलालाई यौनेच्छा शान्त पार्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने पुरानो मान्यताका विरुद्ध उनी खरो रुपमा उत्रन चाहन्छिन् । उनी जस्ता धेरै महिलाका कारण नेपाली समाजमा पुरुष यौनकर्मीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
त्यस्ता पुरुष प्रयोग गर्नेमध्ये युवतीमध्ये एक हुन्, मोडल स्मिता थापा । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हट पोज ब्लोअपमध्ये सर्वाधिक चर्चित तस्विर छपाएकी स्मिता त्यस्ता युवतीहरुकी प्रतिनिधि हुन्, जो पुरूषलाई यौन साधन मात्रै मान्छन् । उनको विचारमा पुरूषले महिलामाथि मायाको नाममा यौन शोषण गरेको छ । अब पालो युवतीको हो । युवतीहरुले पनि पुरूषहरुलाई यौन साथीका रूपमा मात्र हेर्न सिक्नुपर्छ ।
भनिन्छ, केही पुरुषहरू महिलाहरूलाई खेलौनाका रूपमा हेर्छन्, उनीहरू खेल्छन् र उपादेयता सकिएपछि फ्याँक्छन् । के यस्तै कुरा महिलाहरू पनि सोच्छन् ? सोच्छन्, किन सोच्दैनन् ? म त्यस्तै युवती हुँ । पुरूषहरु मेरा खेलौना हुन् । मेरो शरीरले इच्छा गर्दा उनीहरुलाई युज गर्छु । सकिएपछि त्यसको उपादेयता पनि सकिन्छ ।
पुरूषहरू विवाहअघि मजस्तै हट एन्ड सेक्सी गर्लफ्रेन्ड चाहँदा रहेछन् । गाडीमा राख्यो, घुमायो, अनि मोजमस्ती गर्यो । जब विवाहको कुरा आउँछ, उनीहरूलाई घर सम्हाल्ने, सिधा-सादा केटी चाहिन्छ रे ! विवाहअघि पनि गर्ने त्यही हो, पछि पनि त्यही हो ।
त्यसो भए व्यवहारचाहिँ किन फरक ?
’cause तपाईंहरू जस्ता यवुतीलाई उनीहरूले खर्च गरेका हुन्छन,
स्वार्थकै लागि सगंत गरेका हुन्छन्, होइन र ?
अहिले आएर लाग्छ ’cause उसले मेरो चाहना पूरा गर्दैनथ्यो । तर मैले ओरल गर्दा ऊ जति खुसी देखिन्थ्यो, त्यो देखेर मलाई आनन्द लाग्थ्यो ।
’cause उनीहरु अनुभवी हुन्छन् । अर्को कुरा पाको मानिससँग उठबस गर्दा अरुले अनावश्यक शंका पनि गर्दैनन् । मैले अहिलेसम्म आफू सेफ साइडमा बसेर जीवन बिताएकी छु ।
एकपल्ट ४० वर्षको पाको मानिस मलाई यति मन पर्यो कि उसलाई फकाउने क्रममा उसको कारमै हाम्रो सम्बन्ध भएको थियो । त्यसबेला उसले मलाई के सोच्यो होला भन्ने पीर लागिरह्यो । मलाई लाग्यो, मेरो शरीर आवश्यकताभन्दा बढी भोको छ । यो राम्रो कुरा होइन भन्ने लागेको थियो ।
भएन । ऊ मबाट यति प्रभावित भयो कि मेरा लागि सबैथोक छाड्छु भन्न लाग्यो । उसको परिवार बिग्रने डर भएपछि म साइड लागेँ । ’cause उसका श्रीमती, छोरा-छोरी थिए । मेरो उद्देश्य ऊसँग सम्बन्ध राख्ने मात्रै थियो, परिवार बिगार्ने थिएन ।
सन्तानका लागि विवाह किन गर्नुपर्यो र ? मलाई एउटा यस्तो लोग्नेमानिस चाहिएको छ, जो हेण्डसम होस्, असल व्यवहारको होस् । उसलाई म आफ्नो सन्तानको बुवा बनाउन चाहन्छु तर त्यसमा उसको अधिकार हुनेछैन । त्यो मेरो मात्र सन्तान हुनेछ ।